Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Orleans Mardi Gras: Kukosha kweCOVID Vaccinations uye Boosters
Vhiki nevhiki COVID kuchipatara muLouisiana kwakawedzera zvakapetwa kaviri sekuvhiya kweOmicron mudunhu, uye nyanzvi dzehutano hweveruzhinji, kusanganisira avo vanobva kuW. Montague Cobb/National Medical Association (NMA) Health Institute, vanotenda kuti hutachiona hucharamba huchipararira sezvo vagari vanotora chikamu. Carnival uye Mardi Gras mhemberero.
Semhinduro yakananga, W. Montague Cobb/NMA Health Institute nhasi yazivisa kuti irikuitisa chirongwa cheStay Well New Orleans Community Health Fair uye Chiitiko cheVaccine musi waNdira 29, 2022. Ichi chiitiko chekutyaira chichava nepfungwa itsva ye kukurumidza nekuda kwesimba risingarambiki reOmicron.
Sangano reW. Montague Cobb/NMA Health Institute rinoshanda semubatanidzwa wenyika yose wenyanzvi dzinoita tsvakiridzo itsva uye kuparadzira ruzivo kudzikisa nekubvisa kusarurana kwemarudzi nemarudzi uye rusaruraganda mukurapa.
Iyo Gara Zvakanaka New Orleans Community Health Fair ndeyemahara uye yakavhurika kune veruzhinji.
Chiitiko ichi chichaitika neMugovera, Ndira 29, kubva 10 am kusvika 2 pm pa200 LB Landry Ave., New Orleans, LA 70114. Chiitiko chinopa:
• Majekiseni emahara ekutyaira
• Zvishandiso zvehutano
• Kuwanikwa kunhaurirano nenyanzvi dzezveutano dzevatema dzinovimbwa navo
• Kupa zvipo
“Kuvhiya kutsva uku kwakanganisa zvikuru nharaunda yedu, asi isu tine simba rekubatsira kukumisa. Chiitiko cheStay Well New Orleans chakakosha kuti nhengo yega yega yemunharaunda ipinde,” vakatsanangura Dr. Kimiyo Williams, chiremba wevana vepaCobb Institute.
Iyo New Orleans Cluster yeThe Links, Inc. ichashanda sevarongi venzvimbo.
"Kiriniki yekudzivirira iyi mubatanidzwa pakati peCobb Institute, masangano ezvehutano ematunhu nenharaunda pamwe nenharaunda yeNew Orleans kuwedzera kuwaniswa kwekudzivirira," akadaro Tracey Flemings-Davillier, murongi wezviitiko."
Community Covid utano New Orleans mushonga